१२ वर्षे गर्भवतीका आफन्तलाई पीर, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए कहाँ जाने ?
शेयर बजारमा छलाङ, कारोबार रकम पनि बढ्यो
युवाहरू लागूऔषधमा फसेकाले विकासमा प्रभाव पर्‍यो: गृहमन्त्री थापा
धार्मिक र पवित्र स्थलको अनुभूति हुने गरी पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्य विकास गरिन्छ: मन्त्री भट्टराई
समाचार बुधबार, कात्तिक २०, २०७६
ह्ष्टपुष्ट शरीर, हँसिलो अनुहार । भरेको हरियो कुर्तामा रातो स्वेटर । दुई पट्टी बाँधिएको छोटो कपाल ।
धेरै पटक साेधिए पछि हाँस्दै नाम भनिन् । (गोपनियताका कारण नाम उल्लेख नगरिएको) ।
नाम पछाडि के ?
फेरि जवाफ दिइन् ।
के खायौ ?
निकैबेर हेरिरहिन् अनि भनिन् ‘भात’ ।
नजिकै केरा राखिएको छ । तर, बोक्रा ताछेर खान नजानेर सिकाउँदै थिए उनको ठूलो बुबा कृष्ण बोहोरा ।
उनी भन्छन्, “हिजो पनि यसरी खाने भनेर सिकाएँ । अलिअलि जान्दैछे । भात त आफैं खान्छे । अघि पनि खाई ।”
बौद्धिक अपांगताका ती किशोरीको पेटमा ५ महिनाको गर्भ रहेको जिल्ला अस्पताल मंगलसेनको रिपोर्टले देखाएको छ । गत शनिबारदेखि काठमाडौंको प्रसुति गृह थापाथलीमा छिन्, उनी ।
उनको स्वास्थ्य जाँच भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । कृष्णका अनुसार मंगलसेबाट हिंड्दा सबैले पैसा उठाएर २४ हजार पठाएका थिए ।
"बिहीबार अछामबाट हिंडेको, नेपालगंज हुँदै काठमाडौं आउँदा र अस्पतालको बसाइको ५ दिनमा लगभग सकियो । अस्पतालमा प्रसुति सम्बन्धी सेवा निशुल्क छ" बाेहाेरा भन्छन् ।
रामारोशन गाउँपालिका ४ की एक किशोरीलाई लिएर उनका ठुलो बुबा र एक महिला प्रहरी शुक्रबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका हुन् । किशोरीलाई शनिबार अस्पताल भर्ना गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला अस्पताल, रामारोशन गाउँपालिका उपप्रमुख तथा उनका आफन्त समेतको सल्लाहमा उनलाई काठमाडौं पठाइएको हो ।
कुकुरले टोकेर सुई लगाउन बयलपाटा अस्पताल लैजाँदा अवाेध छाेरी गर्भवती भएको उनका बुवाले थाहा पाएका थिए ।
बयलपाटाले जिल्ला अस्पताल मंगलसेन रिफर गर्‍यो । कसले जबरजस्ती करणी गरेर गर्भ बस्यो भन्ने पहिचान हुन छैन ।
पहिलो पटक काठमाडौंमा, सकिसक्यो पैसा
कहाँ के गर्ने, कसलाई के भन्ने केही थाहा छैन । उनी भन्छन्, “काठमाडौं पहिलो पटक टेकेको मान्छे । त्यो पनि यस्तो मान्छे लिएर आएँ, आँत्तेर मर्छु जस्तो भइसक्यो ।”
"ती किशोरीका बाआमा पनि खासै टाठा छैनन्", बाेहाेरा भन्छन् । बेला-बेला बाेल्ने ती किशोरी सधै‌ बुबा कहिले आउँछन् भनेर सोध्छिन् ।
कृष्ण भन्छन्, "आफूले क्यान्टिनमा खाएको खानाको तिर्ने पैसा पनि सकियो ।"
कृष्णसँग छोरीलाई फलफूल खुवाउने पैसा समेत सकिएकाे छ ।
कृष्णका अनुसार ती किशोरी उमेरले १२ वर्ष पुगिन् । तर, परिवारलाई जन्ममिति एकिन थाहा छैन ।
तर, गर्भ ५ महिना नाघिसकेकाले काननुतः गर्भपतन गर्न नपाइने भएकाे छ ।
उमेर सानो भएकाले जटिलता होला भनेर काठामाडौं पठाएको जिल्ला अस्पताल मंगलसेनका सुपरिटेन्डेन्ट डा.मनोज विष्टले बताए । अस्पतालले अब्जरभेसनमा राखेकाले के गर्ने भनिसकेको छैन ।
अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले भने किशोरीका लागि सबै निशुल्क हुन्छ । अहिले नै उनलाई के गर्ने निर्णय भइसकेको छैन, डिस्चार्ज गरेर नलैजाने भए अस्पतालमै राखे पनि हुन्छ । तर, अस्पतालको एउटा बेडमा मात्रै बसिराख्दा पनि झन् राम्रो हुँदैन ।
डिस्चार्ज गरे कहाँ लैजाने ?
थापाथली अस्पतालले डिस्चार्ज गर्दियो भने कहाँ लैजाने ? मुख्य अविभावक बनेर आएका कृष्णलाई पीर छ ।
कस्लाई सोध्नु त्यो पनि थाहा छैन । बाबुआमाको भर छैन ।
"सरकारले केही गर्दिन्थ्यो कि ? गाउँपालिका अध्यक्ष काठमाडौं नै छन् रे भन्ने सुनेको तर फोन नम्बर छैन", छोरीतिर हेर्दै मलिन अनुहारमा कृष्णले भने, "कसैले सहयोग गर्दिन्थे कि ? तर कसलाई, कहाँ गएर, के भन्नु ? "
मंगलबार, असार २३, २०७७ बन्दाबन्दीपछि इन्टरनेटको खपत ३५ प्रतिशत बढ्यो, कसरी भित्रिन्छ नेपालमा इन्टरनेट ?
मंगलबार, असार २३, २०७७ सरिता गिरीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही
मंगलबार, असार २३, २०७७ हिंसा पीडितलाई सार्वजनिक गर्दा संवेदनशील नभए सरकारले कारबाही गर्ने